Dowlada Qadar oo Gawaari ku wareejisey Dowllada Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dowlada Qadar oo Gawaari ku wareejisey Dowllada Soomaaliya
Dowlada Qadar oo Gawaari ku wareejisey Dowllada Soomaaliya
Gaadiidkani nuuciisu yahay Landcroser oo 30 xabo ah ayaa dowladda Soomaaliya waxay ka guddoontay Dowladda Qadar,kuwaasi oo loogu talagaly Ciidamada Booliska Soomaaliyeed kadib munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha degkedda ee Muqdisho.
Waxaa dowladda Soomaaliya u guddoomay Wasiirka Amniga oo uu ka guddoomay Danjiarah Dowladda Qadar ee Soomaaliya Eng. Xasan Bin Xamza,iyadoo uu goob joog ka ahaa Wasiir ku xigeenka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda iyo mas’uuliyiin kale.
“Waxaa mahad iska leh Alle Subxaanahu watacaalaa,intaasi kadib waxaan rabaa in hortiina aan uga mahadceliyo Dowladda Qadar,safar aan dhawaan ku tagay Dalkaasi Qadar waxaan la kulmay Ra’iisul wasaaraha Dalka Qadar ahna Wasiirka Arrimaha gudaha Sheekh Cabdalla Bin C/naasir, wuxuu balanqadaay in uu taageero Dowladda Soomaaliya,taageeradaasi ayaa bilaabatay waxaana maanta aan ka guddoonay 30 baabuur nuuca Landcroser ah, kuwaasi oo loogu talaglay Ciidanka Booliska”.Ayuu yiri Wasiir Islow.
Previous articleCiidanka Asluubta Soomaliyeed oo Soo bandhigey dhoola tus ay ku soo dhaweynayaan sanad guurada aas-aska ciidanka Asluubta
Next articleRaa’iisul wasaare ku xigeenka Dalka oo soo dhaweeyey maxaabiistii Liibiya laga soo celiyey